Leexsi meel kasta oo ay gaarto: howlaha firaaqada ee miyiga | Ragga Stylish
Waxqabadyada madadaalada iyo wakhtiga firaaqada maahan inay ka hooseeyaan oo kaliya magaalooyinka waaweyn. Sidoo kale dalxiisku kuma koobna tagista xeebta xagaaga ama barafka xilliga jiilaalka.
para nasasho, baashaal oo ka baxso jadwalka, waxaa jira howlo badan oo reer miyi ah oo la qabanayo.
1 Hawlaha reer miyiga: xulashooyinka
2 Hababka nashaadaadka xilliyada firaaqada miyiga
Hawlaha reer miyiga: xulashooyinka
Waxaa lagu fahmay dalxiiska miyiga ama xilliyada firaaqada iyo howlaha madadaalada, dhammaan kuwa ka dhaca bannaanka magaalooyinka waaweyn. Laakiin waxaa jira tixgelinno in la tixgeliyo.
Marka horeba, waxay ku saabsan tahay waxqabadyo is-ilaalin kara iyo jawi ku habboon deegaanka. Goobaha waaweyn, sida hudheelada ama xerooyinka kaamilku, qasab maahan inay ku dhacaan kala soocidan.
Si aad uga mid noqotid kaqeybgalayaasha xilliga firaaqada iyo howlaha madadaalada, kuma filna inaad ka tagto magaalada oo aad ku hoyatid xero kala jiiday Soo-booqdeyaashu waa inay ku milmaan shaqada maalinlaha ah ee deegaan kasta.
Hababka nashaadaadka xilliyada firaaqada miyiga
Beeraha: booqdayaashu ma oga oo kaliya baaritaanka caloosha iyo xoolaha caadiga ah ee deegaan kasta. Waxay sidoo kale bartaan diyaarinta suxuun kala duwan, sameynta saxmad, caano, abuur iyo goyn, IWM
Dalxiiska isboortiga. Marka la eego xaddidan xaddidan, waxay ku xiran tahay nashaadaadka tooska ula xiriira astaamaha juquraafi ahaaneed ee gobol kasta: kalluumeysiga isboortiga, ugaadhsiga, baaskiil wadista, iwm.
Hal-abuurnimo: faham sida loo ogaado ugana faa'iideysto deegaanka oo dhan bar tilmaameed gaar ah. Fursadaha ay leedahay waxaa ka mid ah: kala-soocidda, socodka, raafka, iwm.
Dalxiiska dhaqanka: booqdayaashu ma oga oo keliya kuwa dhaqanka soo jireenka ah iyo taariikhda deegaan kasta. Waxay sidoo kale noqdaan dammaanad qaadayaal iyo faafiya waxyaalahan aan la taaban karin.
Ekotourism: waxaa ka mid ah, laakiin aan ku xaddidnayn, ka u fiirsashada iyo ilaalinta dhirta iyo xayawaanka.
Ilaha sawirka: Savia baadiyaha, telecinco
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Waqtiyada firaaqada » Hawlaha firaaqada ee reer miyiga
Afar siyaabood oo isugu jira jaakad jilicsan iyo jaakad